5 အကောင်းဆုံးအမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်များတွင်ဥရောပတိုက်မှအတွေ့အကြုံ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5အကောင်းဆုံးအမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်များတွင်ဥရောပတိုက်မှအတွေ့အကြုံ
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 05/03/2021)
ဥရောပနိုင်ငံများမေတ္တာကိုဂုဏ်ပြုသောသူတို့၏အမျိုးသားအားလပ်ရက်—အထူးသဖြင့်သူတို့၏မြင်သောသူအများကြီး ခရီးသွားဧည့်. စီ ကြည့်ဖို့အဲဒီထဲကနိုင်ငံအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့အမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်များ? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ပူးပေါင်းပွဲတော်!
သင်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခွင့်အဖို့နဲနဲပိုပြီးလေ့လာသင်ယူအကြောင်းကနိုင်ငံ၏ သမိုင်း. ကြုံတွေ့နေရ ဒေသခံမာနဖြစ်စေခြင်းငှါသင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလေးမြတ်တန်ဖိုးထားကြောင်းနိုင်ငံနှင့်၎င်း၏လူပင်ပို။. ကြည့်ရှိသည်ကြရမှာ5အကောင်းဆုံးအမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်များတွင်ဥရောပ:
ဘုရင်ဂျော့ဒုတိယအနန္တသူ၏အစဉ်အလာဂုဏ်ပြုသောဧကရာဇ်၏မွေးနေ့တွင် 1748. ထိုကတည်းက, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းရှိဂုဏ်မွေးနေ့၎င်း၏တေး. သို့သျောလညျး, သူတို့ပြောင်းလဲကြပြီရက်စွဲအကြိမ်အနည်းငယ်. အခုသူတို့ကျင်းပ ဘုရင်မကြီးရဲ့မွေးနေ့အရာရှိ ဒုတိယအပေါ်စနေနေ့ဇွန်လ၏. သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်အတွက်အချိန်ကာလအတွင်း, သင်မြင်ခြင်းငှါအဘုရင်မကြီးရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနား. အခမ္းအနားအစအဖြစ်လူသိများသည် Trooping အရောင်.
အီတလီနွှဲမိမိတို့နိုင်ငံအပေါ်ဇွန်လ ၂, သောအစဉ်အလာသူတို့တွင်စတင်ခဲ့ 1946. မဲေ၏မျက်နှာသာအတွက်ဖျက်သိမ်းအမျက်, အီတလီလူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့သမ္မတနိုင်ငံအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်. သို့သျောလညျး, သူတို့ပြောင်းရွှေ့ပွဲကျင်းပရန်နေ့စွဲပထမဦးဆုံးစနေနေ့ဇွန်လအတွက်သာ 1977. သူတို့တွေဟာသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရက်စွဲအပေါ်အနုတ်လက္ခဏာကိုရောင်ပြန်ဟပ်သူတို့၏စီးပွားရေး. သူတို့သာမယ္ဆိုျအဟောင်းအတွက်ရက်စွဲ 2001. ရှိပါတယ် ပဒေသာပွဲ သက်သေခံရန်အီတလီနိုင်ငံတလျှောက်လုံးတွင်သမ္မတနိုင်ငံနေ့က. အံ့မခန်းဖွယ်အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းမှာအီတလီလေတပ်၏ခုံးကျော်တံတားဖြစ်သည်.
အခပ်သိမ်းသောဆင်နွှဲသူတို့၏အမျိုးသားနေ့အပေါ်ဇွန်လ ၆. ဒါဟာတစ်ရွှင်လန်းသောအခါသမယအတွက်တစ်နိုင်ငံလုံးအ. သူတို့တည်ထောင်သူတို့ရဲ့အလံနမွသာ 1916, အခုကနေ့အတွက်ပျော်စရာနှင့်အပန်းဖြေ. ရှိပါတယ် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများ, ပွဲတော်များ, နှင့်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများသင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်. ဒါဟာအစနေ့အခါအသစ်ခပ်သိမ်းသောတရားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်. အလံနေ့တွင်လူတိုင်းကိုကြိုဆိုပါသည်ဟုဆွီဒင်ကသေချာစေသည်!
Bastille နေ့, ပြင်သစ်
မှကြွလာသောအခါသူကပြင်သစ်, သူတို့ရဲ့နေ့ရက်၏အမ်ဳိးသားေရးအပေါ်ဇူလိုင်လ ၁၄. ဒါဟာအမှတ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အ မုန်တိုင်း၏Bastille. ခဲ့ကြောင်းအရေးပါသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအတွက် 1789. တစစ်ရေးချီတက်ပွဲကိုကျင်းပနီးပါးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကတည်းက 1880. က&#၈၂၁၇;့နေနဲ့အံ့သြဖွယ်ရှေ့တော်တပ္တစ္ခုျ! သို့သျောလညျး, အများကြီးရှိပါတယ်အခြားအထိမ်းအမှတ်ပွဲကြည့်ဖို့အဖြစ်ကောင်းစွာ. Bastille နေ့ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ပြင်သစ်တွင်, နှင့်ဦးစားပေးအတွက် ပဲရစ်.
ဆွစ်အမျိုးသားနေ့သည်သြဂုတ်လ ၁. ဒါဟာတည်ထောင်သူ Canton သုံးခုရှိသောနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသည် ဆွစ်ဇာလန် အမေရိကန်အတွက် 1291. အယူသူတို့၏အမျိုးသားနေ့အနက်. မှတစ်ခုဖြစ်သော အဓိကဖြစ်ရပ်များ အဝါမှအခြန္ကင္းသို့မဟုတ်အခြားအဆင့်မြင့်အရာရှိ. ရှိပါတယ်&#၈၂၁၇;့လည်းအခမ်းအနားတွင်. သင်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်ပွဲတော်အတွက်အခြားမြို့ကြီးများနှင့်အဖြစ်ကောင်းစွာ. ဥပမာ, ဆွစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သူတို့၏ ကျေးလက် အားလပ်ရက် retreats. နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း အခြားအဆင်ပြေရာအရပျဖြစ်တွင်းအမျိုးသားနေ့.
အမျိုးသားအားလပ်ရက် ဥရောပ အလွန်ကြီးစွာသောအခါသမယအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်အဆိုပါသမိုင်းထိုလူမျိုး၏သင်လာရောက်လည်ပတ်. ဒါဟာလည်းအစဉ်အမြဲတစ်နေ့နှင့်ပြည့်စုံပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရးက်င္း.
စီမံကိန်းအတွက်အားလပ်ရက်အပေါ်ဥရောပတိုက်ဤသူ၏အမျိုးသားအားလပ်ရက်? စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား နှင့်ပျော်မွေ့!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်5အကောင်းဆုံးအမျိုးသားရုံးပိတ်ရက်များတွင်ဥရောပတိုက်ပေါ်သို့သင့်ဆိုဒ်? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-national-holidays-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#HolidayinEurope #အားလပ်ရက် #nationalholiday #nationalholidays europetravel